LibreOffice 6.2.8, iyo yazvino yekuchengetedza kuburitswa mune dzino dzakateedzana | Linux Vakapindwa muropa
LibreOffice 6.2.8, yazvino vhezheni yekuchengetedza yeiyi nhepfenyuro yave kuwanikwa
Kana isu taifanira kutaura nezve yakakosha kuvhurwa kwezuva, pasina kupokana kuti kuvhurwa kwaizove kuri kwe Ubuntu 19.10 uye vakasara vemhuri yeEoan Ermine. Asi kune yakakura kambani seCanonical kuvhura nyowani yekushandisa system hachisi chikonzero cheiyo software yenyika kumira uye maawa mashoma apfuura Iyo Gwaro Foundation rakaburitsa LibreOffice 6.2.8. Ndiyo yechisere uye yekupedzisira kugadzirisa kuburitswa mune dzino zvakateedzana.
Parizvino, vhezheni yepamusoro-soro uye iyo ine nhau dzichangoburwa ndeye LibreOffice 6.3.2. Iyo yavakavandudza nhasi ichiri iyo vhezheni yakakurudzirwa, sezvo kambani ichipa mikana yakati wandei pakati payo isu tine yakagadzikana ine zvese zvitsva uye imwe iyo yakagamuchira zvimwe zvigadziriso zvakare iri yakavimbika sarudzo. Iyo Gwaro Foundation inowanzo kutarisirwa kuburitsa matanhatu ekuchengetedza kuburitswa kweakateedzana kuikurudzira kuti ishandiswe pazvikwata zvekugadzira, kunyange zvichiratidzika kuti zvinotevera hazvingasvike 6 kusvika zvakurudzirwa.
LibreOffice 6.2.8 ndiyo EOL vhezheni yacho yakateedzana
Iyo Gwaro Foundation inoraira vese vashandisi vehofisi suite kuti vagadzirise kugadzirisa kuchengetedzwa. Kune rimwe divi, anotiudzawo kuti tigadzirire kugadzirisa kune v6.3.4 yehofisi yake suite nekukurumidza painongowanikwa, chimwe chinhu chichaitika muna Zvita. Sezvatakambotaura, hakuchazove nekumwe kuvandudzwa kweiyo 6.2 nhevedzano, saka vashandisi vanoda kushandisa sarudzo yakatendeseka vanofanirwa kumirira inopfuura mwedzi nehafu kuti vagamuchire nyowani.
LibreOffice 6.2.8 ikozvino yave kuwanikwa yeLinux, macOS uye Windows kubva kurodha pasi peji rewebhu. Vashandisi veLinux vane mukana wekutora suite mu DEB, RPM kana sosi kodhi zvinyorwa. Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuisa iyo vhezheni Flatpak uye iyo vhezheni Snap. Isu tinokuyeuchidza iwe kuti yedzinonyanya kukwirisa-vhezheni vhezheni mune mazhinji epamutemo marekodhi ezvakakurumbira zvekugovera ndeye v6.2.7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 6.2.8, yazvino vhezheni yekuchengetedza yeiyi nhepfenyuro yave kuwanikwa
OAM Microsoft yakavhurwa sosi purojekiti yekurerutsa budiriro paKubernetes
Ubuntu 19.10 uye dzimwe hama dzese dzemhuri yeEoan Ermine dzave kuwanikwa